दु’खद खबर ! बिरा’मी लिएर काठमाडौवाट गएको एम्बुलेन्स त्रिशुली तिरमा खस्यो, एक जनाको नि’धन – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/दु’खद खबर ! बिरा’मी लिएर काठमाडौवाट गएको एम्बुलेन्स त्रिशुली तिरमा खस्यो, एक जनाको नि’धन
दु’खद खबर ! बिरा’मी लिएर काठमाडौवाट गएको एम्बुलेन्स त्रिशुली तिरमा खस्यो, एक जनाको नि’धन
काठमाडौ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका–३ पानीधारामा आज बिहान एम्बुलेन्स दु’र्घटना हुँदा एक जनाको नि’धन भएको छ भने चार जना घाइ’ते भएका छन् । निध’न हुनेमा सर्लाहीको बरहथवा–२ का १५ वर्षीय बादे राना मगर छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता सूर्यबहादुर थापाका अनुसार घा’इते मगरको उपचारका क्रममा पुरानो मेडिकल कलेजमा निध’न भएको हो । अन्य घाइ’तेको अवस्था मध्यम रहेको र सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँबाट बिरा’मी लिएर सर्लाही जानका लागि आउँदै गरेको ना ५ च १०३३ नम्बरको एम्बुलेन्स आफैँ अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ५० मिटर तल त्रिशूली नदी किनारमा ख’स्दा चालकसहित एम्बुलेन्समा सवार सबै घाइ’ते भएका छन् । दुर्घ’टना बिहान ५ः१५ बजे भएको थियो ।
काठमाडौंको टोखामा श्रीमान-श्रमती मृत फेला,घनस्थलमा फेला पर्यो यस्तो अनौठो कुरा,सबैको होस् उड्यो